Hanemono OK pamuganhu dzidziso?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Hanemono OK pamuganhu dzidziso?
Mumakore achangopfuura, nokuti wakabudiswa magazini akawanda nepachinko, mashoko zvava nyore saka kupinda ruoko. Saka, kana munhu akarova nepachinko, kamwe, I think're kuziva nokuona kuti vakaona vanoti muganhu dzidziso.
Pano, pamuganhu dzidziso, ndinoda kuti mutarire. Chokutanga, pamberi nyaya muganhu dzidziso, pane chinhu icho anonzi pamuganhu. The nepachinko Machine, pane guru raparadza mukana, ukuwo. Muganhu mutsetse, kana jackpot mu jackpot mukana napadare muchina, mari yakanga cashed mari uye payout kuti mari, anoti hofisi pfungwa kuti ndinoiitawo kana kubvisa 0.
kune nepachinko iri, mutsetse uyu muganhu, huru raparadza mukana nekufambisa Chang zvazvingava, nezvimwewo, kuzodzosera akaverenga kubva siyana kusanganiswa tsika, chinotaurwa sokuti nhamba nokumukirana zviuru Yen. Nepachinko Machine ndiko, uye kunze, kudzokorora kana kwete kunze, tinogona kuti wekuita kuti jackpot mukana kuti yakatogadzirwa.
Naizvozvo, akarova pamuganhu mutsetse kana kupfuura anofa kuti yakatogadzirwa nerimwe muchina, kana kuti wekuita pamusoro yakatarwa jackpot mukana kune muchina, nekuti kuti Tingawaneiko, 'That pfungwa pamuganhu dzidziso.
zvirokwazvo, hunonzi, asi ndinofunga kuti aizova zvakadaro, hazvipindi Chaizvoizvo kudaro zvakanaka ichi. Achitaura sei, nepachinko parlors yave ichiitwa zvipikiri kugadziridzwa nokuda chitoro. Nepachinko parlors muri mbambo kuchinja muganhu mutsetse mumugwagwa, zvinoita sokuti hapana mangwanani.
kana zvirokwazvo rakazaruka chipikiri kumativi pakutanga, kana iwe kufunga kana panewo mhiri miganhu, etc. Kana akasungirirwa chipikiri kuchinja kubva kumativi chibharo, akanga kugadziridzwa, akadai tichibvisa bhora iri, kunyange zvikuru kutanga kumativi, kuderedza payout achava nokukurumidza. Kana totaura
ose payout, iri chete kuvhura chete chipikiri pedyo kutanga, I chinhu kuti zvava kukwana. Kudzidzira izvi muganhu dzidziso, dziri yakarongwa chiso puranga, tikatarisa ose chipikiri kugadziridzwa, zvinoderedza pakati balls Unofanira chiduku tafura kusarudza.
napo refu-akamirirwa kunze bhora, pasina nokuderedza, kana asina kunyura inotevera guru raparadza, asi kana uchitarisa zvachose pachiyero vachibhadhara, anova asina kunaka, nekuti haasisiri muganhu dzidziso kugutsikana. Zvisinei,
, ndiko kuti ane nepachinko kuisa ichi muganhu dzidziso mumusoro mangu, kuti ndiwane Ndinofunga kuti inoshanda chaizvo. Kana nepachinko ndiko, nenguva iyo convergence kusvika guru raparadza mukana, kuitira kuti mari ndiyo nhamba kukosha asingabatsiri uye kutendeukira ichi zvikuru muna zviuru Yen rakadzika.
kutungamirira ayo rotational kumhanya, kana tikasarudza pachikuva, pane tinongoita kupfura Ndinofunga kuti mugumisiro wakanaka. Kudzidzira muganhu pfungwa, kutora nguva, unofanira kuunganidza mashoko zvakare akaita pamusoro yakareba nguva.
Zvisinei, kubva raparadza iri dzidziso, kungava kuti pane inokosha wekuedza.